Kukho abantu abambalwa abaya kuhlala bengenamdla kumboniso wokuhlula. Bonisa ukukhwabanisa ngokuzenzekelayo ngaphandle kokulungiswa okufutshane kuyo, kuya kubakho ukukholisa isiqingatha sakho ozithandayo, ngokubalulekileyo, ukucinga ngezinto ezithile. Zeziphi na? Iimfihlelo zendlela yokudansa i-striptease kunye nathi zabelwana nge-striptease yobuchwepheshe, ngoko hlalani kwaye siqala! Into yokuqala kufuneka uyibeke ingqalelo ekuhambeni komculo. Ayikho yonke imimiselo efanelekile kwimeko. Into eyona nto kukuba ukusuka kwimivalo yokuqala yomculo unomdla ococekileyo emzimbeni wakho, umzimba ukhululekile, yonke imigaqo yobuqhetseba yaphuma ekhanda lakho, kwaye umzimba uphazamiseka ngokobulili. Apha, ewe, kufuneka ugqibe kwiivenkile zakho zomculo. Ukuhlola ezinye zeentshukumo, kwaye ude uthathe umculo njengoko isiseko singabakho kwii-movie. Umzekelo omhle ifilimu ethi "Stripper" eneenkwenkwezi ezinqamlekileyo uDemi Moore okanye ifilimu ezi-9 ½ iiveki.
Umzuzwana olandelayo, omele uwuqwalasele, ngumfanekiso wesilingo. Ungubani na? Umvampu wesifazane okanye ummelwane wentombazana, okanye mhlawumbi i-narcissist narcisissist? Ixesha lokucinga malunga nesayiti sakho, cinga ukuba kukho into enjenge-sexy kwi-wardrobe yakho. Ukuba akukho nto inomdla, mhlawumbi ufanele ukuphosa ihlazo kwaye ujonge i-spark kwi-boutique esondeleyo? Enyanisweni, kukho i-boutique apho ifantasy iqhubeka khona! Ungathenga iimpahla ezininzi zehlabathi kunye, ukuze zidibaniswe kwaye zikumangalise iqabane lakho kunye nemifanekiso emitsha nemitsha.
Emva koko, kufuneka uqaphele ukuzenzela kunye neenwele, kufuneka babe ngumcedisi womfanekiso wakho.
Iingcebiso ezimbalwa zokukhetha iimpahla. Ubuncinci bokuzibophelela, iitshi, iifowuni, ezinokubangela ubunzima xa uvula. Inketho enkulu ingaba yiVelcro kunye neenkinobho, into eyona nto kukuba abanalo umzila ongathandekiyo kwiisitokethi zakho, "Iingcambu" kunye nokuthukuthela.
Ayikho enye idrase yokudanisa eneenyawo ezingenanto! Ingxenye ebalulekileyo yomfanekiso izicathulo! Ukususela kwi-home-based assortment, ukukhetha ezo zihlangu apho uzimela ngokuzithemba kwaye uhambe ngokukhululekile kubo, kuba oku akusihlwa ngokuhlanganisana etafileni! Khumbula ukuba izicathulo zimele zihambe emilenzeni yakho, ukuze ukwazi ukususa izitokisi zakho ngexesha elifanelekileyo!
Ngoku kufuneka ucinge ngendawo apho kufuneka umangalise intanda. Yakha imeko engummangaliso. Ukukhanya okungahambi kakuhle kuya kukunceda ukujamelana nokuzonwabisa kwaye ukhulule iqabane lakho. Ukuba akukho zibane ezincinci ezinezibane ezikhanyisiweyo, ungazibeka endaweni yeekhandlela, unganokukhanyisa abambalwa abaqhelekileyo kunye nesibini kunye nephunga elimnandi (kufuneka ukhethe i-flavour eyodwa kuphela), ungasebenzisa intonga enamakha.
I-Striptease ayikho nje ngokuthatha izambatho ezintle, kufuneka uqaphele umoya okhethekileyo. Ngoko kukho umsebenzi wengqondo. Musa ukugqithisa ingubo yakho ngokukhawuleza, nantsi into ephambili kukunciphisa ingcamango yakhe, akukho nto ayaziyo yonke i-millimeter yomzimba wakho, kuluhlu lokungazi. Udinga ukutyhila umzimba ngokuzonwabisa okhethekileyo. Ummandla womzimba okhutshiwe kwiingubo kufuneka uboniswe ngokuziqhenya okhethekileyo. Thatha, umzekelo, iiglavu. Ubona ukuhluka okukhulu kwesandla esinye kwisiglavu, esinye isandla ngaphandle kweglavu (usususile kakade), isandla samahhala ngaphandle kweglavu unokukhathaza iqabane lakho. Ukusebenzisa iiglavu, zama ukubetha, ubonise umehluko.
Hambisa kumculo. Bala ngokuthe ngqo konke ukunyakaza kumculo. Ukuba njengomhlobiso usebenzisa udonga kwaye ucwangcise ukuyisebenzisa ukuxhomekeka kuyo, ngelixa ujikeleza imbongolo, ngoko kufuneka ubale ngokuchanekileyo inani leemfuneko zokuhamba. Ukuba uyaphinda intshukumo elinye elikude nodongeni, liyakubonakala ngathi libuhlungu kwaye lihlehlise, kwaye ukuba uyayiphinda kulo lonke uhlobo, umbukeli wakho uya kutshintshela ingqalelo kwenye into okanye aze afuneke. Uhambo luhamba ngokuphindaphindiweyo ngaphezu kwamaxesha amane.
Isixhobo esibalulekileyo sowesifazane nguye amehlo akhe. Akukho mfuyo enokudubula njengaye, njengoko sinokudubula ngamehlo ethu, bafazi! Ubuso buso bubaluleke kakhulu. Imbono kufuneka ibe yingozi, ubuso kufuneka buchaze i-languor enhle, njengokungathi uyonwabile.
Ingqungquthela ye-striptease yiyo xa umzimba wakho omuhle ushiya inkcazelo yokugqibela yengubo egubungela umzimba omuhle.
I-PS Kwi-striptease, umxholo omhle, kwaye akunakunceda ukuba kukho into eyenziwa ngokwahlukileyo kunokuba uyihlose. Naliphi na i-hitch kwi-striptease inokutshitshiswa, kwaye akukho namnye ongatsho into into engafanelekiyo, ukubonakala okungazilibalekanga kunye nomoya ontle uya kunikwa wena kunye nomlingane wakho ngokuhlwa.
Ukuthandana kwi-intanethi ubuhlobo obusondeleyo
U-Jesse - iipilisi zokulawula uzaliso ngefuthe le-antiandrogenic
Ukuqwalasela ukuziphatha kakubi komntwana
Izambatho zangaphantsi zebhinqa zika-2015: iintlobo zangoku
I-Orange kunye ne-blueberry soufflé